ज्याकेटको मुल्य २१० रुपैया मात्र ! कर छल्ने काइदा यस्तो – Janacharcha.com
» आर्थिक अंक: 1953
ज्याकेटको मुल्य २१० रुपैया मात्र ! कर छल्ने काइदा यस्तो
आनन्द भोपालका कर छल्नेको अब्बल सुचीमा
Janacharcha.com बिहिबार, पौष १०, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, पुष १०
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत न्युरोडस्थित आरबी कम्पेलेक्सका कपडा होलसेल व्यापारीहरुले व्यापाक कर छली गर्ने गरेको पाईएको छ । उनीहरुले नेपालका विभिन्न ठाँउका खुद्रा व्यापारीहरुलाई लत्ताकपडा बेचबिखन गर्दा कम मुल्यको बिजकहरु जारी गरी कर छल्ने गरेको पाईएको हो । न्युरोड लगाएत काठमाडौंका अन्य स्थानहरुमा पनि यस्ता खाले कर छलीको कारोबार हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार होलसेल व्यापारीहरुले जारी गर्ने बिलमा समानको मुल्य ७० प्रतिशत भन्दा कम हुनु गरेको पाईएको छ । त्यसो गर्दा होलसेल व्यापारीहरुले ७० प्रतिशतसम्म कर छली गर्न मौका पाउदछन् । जनचर्चालाई प्राप्त केही त्यस्ता बिलहरुमा समानहरुको मुल्य अपत्यारीलो छ । प्राप्त बिलहरुमा ज्याकेटको २१० रुपैयाँ, बिनकल टिर्सट (भेष्ट) ८५ रुपैयाँ, विन्ड चिटर ३२५ रुपैयाँ, टाउजर १२० रुपैयाँ, जम्फर ४०० रुपैयाँ मुल्य उल्लेख भएको पाईएको छ । जुन असली समानको मुल्यभन्दा ७० प्रतिशत कम हो र किन्ने खुद्रा व्यापारीलाई पनि ७० प्रतिशत कमकै बिल दिइने गरेको पाईएको छ ।
१ लाख बराबरको एक बिलमा उनीहरुले १० हजार रुपैयाँ सम्म कर छली गर्ने गरेका छन् । एक वर्षभरीमा ठुला व्यापारीले दशऔं हजार बिल काट्ने गर्दछन् । यसरी हेर्ने हो भने उनीहरुले वर्षभरीमा राज्यलाई करोडौंको राजस्व छली गर्ने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंका व्यापारी आनन्द भोपालक कर छली गर्ने अब्बल सुचीमा छन् । उनी कर छली गरेर विगतका केही वर्षमै काठमाडौंको हाईप्रापईल एरिया घरघडेरी जोड्न र बैंकमा करोरडौं बैंक व्यालेन्स डिपोजिट गर्न सफल भईसकेका छन् । दाजुको व्यापार चम्कीएपछि उनका भाई अरुणले पनि काठमाडौंमा यही धन्धा शुरु गरिसकेका छन् ।
न्युरोडमै राजस्वको कार्यलयको शाखा रहेता भने उक्त विषयमा भने कार्यलय बेखबर रहेको छ ।